Inona no hatao raha misy iPad mangalatra - Geofumadas
Janoary, 2014 Apple - Mac
Aleo ny olana dia mety ho mazava, saingy aloha na aoriana dia mila mahafantatra izay tokony hatao ianao rehefa mangalatra a iPad. Ary raha toa ny sasany amin'ireo mihatra amin'ny iPhone, iPod Touch ary iMac, tiako ny hanararaotra izany mba hanamafisana izany ho fanomezam-boninahitra ny zavatra nianarako androany teo:
1. Aza aseho amin'ny halatra araka izay azo atao ny tenanao.
Fitaovana ilaina amin'ny fifandraisana amin'ny fotoana rehetra ny iPhone, fitaovana miasa ny iPad. Nisolo ny diary taratasy, pensilihazo, solosaina finday, fakan-tsary, boky, ary gameboy anay izany. Noho izany dia tokony hialanao amin'ny fampisehoana azy tsy amin'antony izany, izay manantena ny hangalatra fitaovana elektronika dia hanaraka anao ary hitady izay hataonao.
Raha handeha hiara-misakafo ianao, aza avela hijanona eo amin'ny birao, fa eo ambany locka sy fanalahidy, na dia mendri-kaja aza ny olona rehetra ao amin'ny biraonao.
Raha toa ka manadino izany, aza alaina any amin'ny toerana izay tsy maika.
Raha miara-mihinana amin'ny namanao ianao, aza maka izany, fa fitaovana iray amin'ny asa, fa tsy fanelingelenana amin'ny fotoana izay tsy maintsy atokana ho an'ny olona manan-danja.
Raha entinao ao anaty fiara izany dia aza entina amin'ny fipetrahana eo anilany, na ny tanky eo aloha, na amin'ny fitoeram-baravarana. Aza avela ny zanakao hitondra izany amin'ny seza aoriana milalao Angry Birds, aza mampiasa azy io rehefa mitondra fiara. Ary ambonin'izany rehetra izany, aza alaina misokatra ny fitaratra any amin'ny faritra an-tanàn-dehibe, isan'andro dia matetika kokoa ny moto mijanona eo akaikin'ny jiron'ny fifamoivoizana na miadana ny fifamoivoizana, manery anao hanome ny finday, poketra, na izay tazana. .
Raha miafina ao anaty fiara ianao, dia mety ho ilaina kokoa noho ny eritreretinao izany, indrindra raha halatra ny fiaranao.
Raha mankany amin'ny toeram-pivarotana lehibe ianao miaraka amin'ny zanakao, raha tsy ilaina izany dia aza raisina. Ampisaraho amin'ny fiainam-pianakaviana io fitaovana miasa io, any an-trano dia azo ampiasaina hijerena Facebook na hilalaovana amin'ny zanakao (satria fitaovana fialamboly koa io)
Ary raha tsy maintsy ataonao izany dia alao antoka fa hainao ny manafina azy. Mini iPad dia tafiditra ao afovoan'ny kahie, ao am-paosin'ny palitao, na dia eo ambanin'ny sandry aza.
2. Fantaro mialoha izay hataonao raha very ianao.
Tsy misy olona manantena ny hitrangan'izany, fa ny tsara indrindra dia ny miomana amin'izany, koa tadidio ao an-tsainao ireny torohevitra ireny.
Ataovy foana ny GPS. Ireo fitaovana ireo dia mitondra fitaovana, koa raha angalarina dia azonao atao ny manara-maso ny Internet misy azy, na farafaharatsiny izay nalehan'ny mpangalatra.
Ataovy izay hametrahana ny fampiharana fikarohana iPad, ary avelao ny fikirakira amin'ny sehatra ankapobeny. Amin'ny kinova iOS taloha, mety ho kilemaina izy io, izao dia mila ny teny miafin'ny mpampiasa. Ataovy ao an-tsaina fa miasa ihany izy io rehefa mifandray amin'ny Internet ny solosaina, ka raha any an-tany hafa ianao ary tsy manana SMS mavitrika dia ho sarotra izany.
Mitana ny fanalahidy mavitrika amin'ny iCloud.com, ary andrana aloha ny fomba fiasan'ny toeran'ny fitaovana. Raha nangalatra teny amin'ny arabe ny fitaovanao, tsy maninona tsy araho ny mpangalatra, mandehana mivantana amin'ny Internet ary mieritrereta izay hatao. Raha nafoinao ilay izy dia mila fantarinao hoe aiza no misy azy. Raha tsy fantany io dia azo atao ny manamboatra fa misy hafatra tonga any amin'ny mailaka rehefa mifandray amin'ny Internet ny fitaovana, noho izany dia tsy maintsy ampandehonao ny safidin'ny fomba fangalarana, izay hamonjy toerana iray ihany koa amin'ny sarintany isaky ny mifandray izy.
Ataovy mavitrika ny lakile fanidiana. Somary tsy mahazo aina ny manoratra azy amin'ny fotoana rehetra, fa raha sendra halatra na fatiantoka dia manome fotoana kely anao alohan'ny hihazakazahana hamerina azy io amin'ny tahotra sao hanala vaovao lehibe izy ireo.
Midira amin'ireo kaonty heverinao fa misokatra amin'ny iPad ary manakatona ireo fivoriana mavitrika. Mamela izany ny Facebook sy Gmail raha tsy mila manova ny teny miafinao. Tadidio izay karazana kaonty ampiasainao matetika, aleonao misoratra anarana toy ny Twitter, Skype, Dropbox, raha ilaina dia ovao ny teny miafina, azo atao am-pilaminana izany raha mihidy ny fitaovana.
Raha vantany vao mikatona ny kaonty, raha tsy mifandray amin'ny Internet ilay fitaovana, dia azonao atao ny sahy manokatra azy io, raha mpangalatra ilay mpangalatra, dia afaka manandrana mifandray amin'ny Internet izy. Raha manana ny sary ampiarahina amin'ny Dropbox ianao dia mety ho hitanao ny sary nalain'ilay tovolahy ary azo ampiasaina amin'ny zavatra iray izy ireo, na dia hanipy azy aza izany.
3. Manapa-kevitra ny amin'izay hatao mba hamerenana azy io
Raha hitanao fa mbola mifamatotra ilay fitaovana, ny fomba iray hanarahana azy dia amin'ny iPhone mifandray amin'ny Internet, mila misoratra anarana fotsiny ianao ao hoe te hikaroka fitaovana hafa ianao, ampandehano ny tenimiafin'i Apple dia azonao atao ny manaraka azy. Aza manaraka an-tongotra izany.
Raha ao amin'ny tranobe na birao iray ihany ianao dia miala sasatra, manakeke akaiky araka izay azo atao ary mampihetsika ny feo. Mety haneno eo amin'ny fipetrahan'ny trano fidiovana io, ao anaty valizin'ny mpiara-miasa aminao, na koa amin'ny pataloha vehivavy antitra… Fantaro izay holazainy aminao.
Raha any amin'ny toerana ho an'ny besinimaro ianao, dia miezaha haka azy saingy tsy mandeha irery, mety ho mpiambina ny trano.
Raha any amin'ny paikady ianao dia mila ny volavolan-dalàna ary angamba ny baikon'ny polisy.
Raha any amin'ny faritra mampidi-doza ianao dia diniho indray hoe ohatrinona ny ainao. Mety hiafara amin'ny famoizanao ny iPhone, ny fiaranao ary ny ainao mihitsy aza. Miankina amin'ny firenena misy anao, jereo raha afaka matoky ny polisy eo an-toerana ianao amin'ny asa famonjena, tsy misy olona te-hanao fahavalo amin'ny ho avy noho ny artifact izay tsy manana fanahy.
4. Inona no hatao raha tsy azonao arahana izany
Ny kinova taloha tamin'ny iPad dia tena mora namerina na nanidy ireo gps. Mety hitohy izy ireo satria tsy manaiky kinova farany an'ny iOS.
Na izany aza, mety hitranga amin'ny fitaovana vaovao izy io. Misy mpangalatra tena manam-pahaizana ary raha ny marina dia tsy misy antoka izany raha vonoina ny fitaovana dia afaka hita izy io.
Raha mahatsikaritra ianao fa tsy azo averina ilay fitaovana, avy amin'ny kaonty iCloud dia fidio ny atiny hamafana. Milamina ianao amin'izany.
Aza adino ny milaza ny halatra, satria mety hiseho eo amin'ny sehatry ny asa ratsy izany ary afaka misoroka korontana isika. Izy ireo koa dia manana puce finday izay azon'ny mpanao heloka bevava ampiasaina amin'ny fanararaotana.
Aza mijaly, aza mitomany, aza mikapoka ny tenanao, na avelao ny vadinao hanao lahateny anao. Ekeo fotsiny fa tonga taminao by maje. Azafady ny teny, fa amin'ny andro hahafoizanao azy dia tsy hahatsapa ho ambany ianao.
Avy eo dia mieritrereta momba ny fomba hividianana hafa ary manomboka izao dia ho paranoida bebe kokoa. Raha efa herintaona no nampiasanao azy dia ho hitanao fa tsy afaka miaina tsy misy izany ianao.
Manontany fotsiny aho hoe: maninona ny gara iray manontolo izay mitentina 9,000 $ no tsy manana fitaovana haka izany? IPod $ 250 tsotra no manana izany; vonona ny handoa vola fanampiny amin'izany izahay.
Natonta tamin'ny BlogPad Pro
Previous Post«Previous BlogPad - Editor WordPress ho an'ny iPad
Next Post Tokony ho fantatry ny geomatician momba ny fenitry ny fitantanana ny tany LADMmanaraka »
Valiny iray amin'ny "Inona no tokony hatao raha mangalatra iPad"
Manuel Medina hoy izy:
LOL. Tsy fantatro hoe maninona no heveriko fa nalaina tamin'ny tantaram-piainana tena izy